धेरै गुलियो खाँदा दिमाग सुस्त.....? - Health Today Nepal
धेरै गुलियो खाँदा दिमाग सुस्त…..?
September 23rd, 2019 मानसिक स्वास्थ्य0comments
एजेन्सी,असोजः के तपाई धेरै गुलियो खानुहुन्छ ? होसियार, धेरै गुलियो खाँदा मानसिक स्वास्थ्यमा खराब असर पर्न सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । पछिल्लो एक नयाँ अध्ययनका अनुसार धेरै गुलियो खाँदा दिमाग सुस्त हुन्छ । गुलियो खाएपछि तपाईंले अल्छी लागेको अनुभव गर्नुभएको छ ? हालै गरिएको एक अध्ययनका अनुसार, धेरै गुलियो खाँदा हाम्रो शरीरमा चिनीको असर देखिन थाल्छ जसकारण हाम्रो दिमागको कार्यक्षमता सुस्त हुन्छ ।
यस अध्ययनमा संलग्न व्यक्तिहरूले चिनी सेवन गरेपछि आफूहरूको ध्यान तथा प्रतिक्रिया समय घटेको अनुभव गरे । फलफूलमा भएको प्राकृतिक चिनी वा कृत्रिम चिनी सेवन गर्ने व्यक्तिको तुलनामा साँच्चिकै चिनी खाने मानिसले सुस्तता अनुभव गरे ।
अध्ययनमा संलग्न न्युजील्यान्डको ओटागो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मेई पेङ भन्छन् ‘हाम्रो अध्ययनले ग्लुकोजसँग सम्बन्ध भएको सुगर कोमा वास्तवमा हुने देखाएको छ । यस अवस्थामा चिनीको मात्रा अधिक हुने ग्लुकोज सेवनपश्चात् व्यक्तिको सतर्कता घट्न थाल्छ । विशेषगरी चिनी सेवनपश्चात् हाम्रो मस्तिष्कमा कस्तो परिवर्तन आउँछ भनी हाम्रो अध्ययनको जोड थियो ।’
यसअघि भएका अध्ययनमा ग्लुकोजले शरीर र मस्तिष्क दुवैलाई सकारात्मक असर पार्ने देखाइएको थियो । यसले हाम्रो स्मरणशक्ति बढाउने बताइएको थियो । तर ताजा अध्ययनले चिनीको अत्यधिक सेवनले मस्तिष्कमा खराब असर पार्ने र दिमाग सुस्त हुने देखाएको छ ।
Previous article काउन्सिलमा नर्सको नामदर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा कात्तिक ३० गते तय
Next article एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा अन्सारी र मण्डलले ल्याए सर्वोत्कृट अंक
बनेपामा आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धि सचेतना
पूरुषको तुलनामा महिलामा मानसिक रोगी बढी
सामाजिक न्यायको प्रतीक्षामा मानसिक स्वास्थ्य